प्रदुषित पानीका कारण झाडावान्ताका बिरामी बढे - Himalaya Post
प्रदुषित पानीका कारण झाडावान्ताका बिरामी बढे
Posted by Himalaya Post | २५ असार २०७६, बुधबार १४:०० |
चितवन– वर्षात् शुरु भएसँगै दुषित पानीका कारण रोग देखा पर्न थालेको छ । यहाँको सरकारी अस्पताल भरतपुरमा दैनिक झाडावान्ताका बिरामी आउन थालेका छन् । निजी अस्पतालमा पनि यस्ता बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. महेन्द्र अग्रहरीका अनुसार एक सातायता दैनिक सात÷आठ झाडावान्ताका बिरामी आउन थालेका छन् । प्रदुषित पानीसँगै भारतबाट आयातित आँपका कारण रोग देखापरेको डा. अग्रहरीले जानकारी दिए । यस्ता बिरामी युवा अवस्थाका छन् । निजी अस्पतालमा पनि झाडावान्ताका बिरामी आउन थालेका छन् ।
सङ्क्रमित पानीमा टाइफाइडको किटाणु पनि हुने हुनाले त्यस्तो पानीले टाइफाइडको ज्वरो आउने अग्रहरी बतउँछन् । यस्तो ज्वरो आउँदा टाउको दुख्ने गर्दछ । अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा।भोजराज अधिकारीका अनुसार बहिरङ्ग सेवामा आएका बिरामीमध्ये १५ प्रतिशत मौसम परिवर्तनसँगै हुने रोगका बिरामी छन् ।
दुषित पानी पिउन वा खाना बनाउन प्रयोग गरिएमा विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया, प्रोटोजोवा, भाइरस तथा अन्य जीवाणुले मानव शरीरमा प्रवेश पाउँछन्् र रोगहरू सार्दछन् । पानीको स्रोतमा जाँच गर्दा ‘कोलिफर्म’ ब्याक्टेरिया भेटिएमा उक्त पानी पिउनका लागि तथा खाना बनाउन उचित नहुने चिकित्सक बताउँछन् । रासस
Previousभारतविरुद्ध न्यूजिल्याण्ड : वर्षा रोकिए ४६.१ ओभरबाटै सुरु हुनेछ खेल
Nextकांग्रेस र राजपाद्वारा संसदमा नाराबाजी र रोष्टम घेराउ
रथयात्रा हेर्न गएका तीन किशोरी १० दिनदेखि बेपत्ता
३० भाद्र २०७५, शनिबार ०८:०८
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै नेविसंघद्वारा प्रदर्शन
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १७:०२
बाढी प्रभावितलाई राहत दिन रौतहट पुगे सांसद आलम
५ आश्विन २०७६, आईतवार १८:०५